Taariikhda My Butros » 5 Ways Creative in dhahdaa waan ku jeclahay
“Waan ku jeclahay”, waxaa jira weedho kale oo dhowr ah in uu yahay sidii daahir ah iyo sida macno leh maadaama ay tani ka mid. Sadeexda inta badan ku filan in lagu fududeeyo ilaa niyadda ah ee la jecel yahay; Si kastaba ha ahaatee, haddii aad anfaco siyaabo qaar ka mid ah hal abuur leh, in la yidhaahdo “Waan ku jeclahay”, billabeen ee wejiga saartay oo sida xaqiiqada ah waxay noqon doonaan xitaa ballaaran.
Eeg, kuwaas oo shan siyaabood oo hal abuur leh ee ku hadlaan saddexda erayo rabbaani ah; hubaal waad u jeclaan doonaa dhowr ah isku deyayo, haddii aanay dhan.
1. Waxaad dhahdaa iyadoo hadiyad: Waa in aad la yaabban tahay in sida sidan waa hal abuur leh sida waxa laga yaabaa inay ugu da'da weyn iyo habka ugu adeegsado in la yidhaahdo waan ku jeclahay. Fikrad Tani waa kala duwan yihiin sababtoo ah waxaad ogolayn inay qaado kaliya hadiyad kasta, hadiyad wax aad la jecel yahay in uu leeyahay xasuus ku rakiban.
Waxay noqon kartaa collage of photos bandhigaya daqiiqado ka weyn laba idinka mid ah wada qaatay, ama waxay noqon kartaa labada ciyaaryahan ugu horeeyay ee koob kafee aad soo iibsatay marka aad bilowday wada nool (aad hubiso in aad la shakhsiyeeyo yara by qoraal ah oo wax qurxoon yar oo ku; haddii aadan aad u wanaagsan at qoraal aadmi ah “Waan ku jeclahay” samayn doonaa.
Hadiyadda hubaal ka dhigi doonaa lamaanahaaga dareenka iyo in la joogo waqtiga saxda ah, in la yidhaahdo waan ku jeclahay.
2. Waxaad kariyo karaa iyada: Isku-cookies wadnaha-qaabeeya iyo koob mocha caffÃ¨ ereyada “Waan ku jeclahay” ku qoran ee ku saabsan isticmaalidda shukulaatada weyn shaqeyn lahaa.
Qabsado uu iyada gacanta, dhihi waan ku jeclahay, iyo iyada bixiyaan kabasho ah mocha caffÃ¨ ka. Waxay hubaal xusuusan doonaa xilligan sanadaha soo.
3. Isticmaal waraaqo aad gidaarka: Ma waxaad rabtaa in aad loo jeclaa ayaa saaka si aad u bilowdo maqalka saddexda erey ee maan? Just collage wadnaha-qaabeeya ku muraayad musqusha adigoo isticmaalaya qoraalada cas ama casaan dhegdheg iyo qori waan ku jeclahay waxay ku.
By sidaas samaynaya u yeelan doontaa in la hubiyo in aad ka hor inta uu arko wejiga u gaar ah, aad xaaskaaga ama qofka arkaa erayada qurxoon; ka dibna u raac by hab diiran ka dambeeya iyo maydaan ku erayada “Waan ku jeclahay” iyada oo dhegta.
4. Ku caawi iyada diyaar u ah shaqo u hesho: Tani waxay noqon lahayd hab fiican oo leh waan ku jeclahay gaar ahaan haddii aad xaaskaaga ama qofka uu leeyahay maalin ka duulaan hor.
Dharkeedii Iron, diyaariso quraac fudud iyada, iyada ku caawin si aad u hesho bac xafiiska iyada diyaar u ah oo dhihi waan ku jeclahay oo kaliya ka hor ayay ka tago shaqo.
Haddii aad haysato waqti, Waxa kale oo aad iyada tagi karaan xafiiska ka hor inta sii jeeday goobta aad ka.
5. Record: Tani waa hab fiican oo ah gaarsiinta fariinta jacaylka loo eegin in aad u sheego markii ugu horeysay ama muddo n. Waxay noqon kartaa fiidyow la soo duubay ama audio ah lagu qoro jecel yahay aad u jeclaan doonaa,.
Indhahaagu waa in mar walba oo wuxuu ku yidhi “Waan ku jeclahay” in qofka aad jeclaan, laakiin waxa ay ku hadlaan waqti ka waqti sidoo kale waa mid aad u muhiim ah; by tijaabinaya siyaabaha kor ku xusan oo ku yidhaahdeen saddexda erey ee jannada, waxaad samayn doonaa oo kaliya bond u dhexeeya xataa laba aad ka xoog.